Mamaklub - အပိုင်း 307
ဘေကွန်, ကြက်သားနှင့်ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ Hodgepodge
ပထမဦးဆုံးသင်တန်း / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
ပါဝင်ပစ္စည်းများ 1,5 bedryshek 600 ဆဖက်တီးဘေကွန် 1006ကြီးမားသောဝက်အူချောင်းအရသာရှိတဲ့အမဲသား brisket underwire2ဂရမ်ကြက်သားတန်းကီလိုဂရမ်
အချိုပွဲ / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - gelatin အိတ် 1 - 60 ml ကိုရေအေး - ကြက်ဥအနှစ်3အပိုင်းပိုင်း - သကြား 110 ဂရမ် - သံပုရာဖျော်ရည်ကို 120 ml - သံပုရာခွံ2Tsp .. - ဖက်တီးမုန့် 250 ml - ကြက်ဥလူဖြူ3အပိုင်းပိုင်း - သံပုရာ 1 အပိုင်းအစအဘိတ်: အဆိုပါခွက်ကို
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - Gingerbread 200 ဂရမ် - ထောပတ်6အနုပညာ။ l ။ - သကြား4အနုပညာ။ l ။ - ရွှေဖရုံသီးစင်ကြယ်သော 250 ml ကို - ကိုမြည်းစမ်းဖို့မြေပြင်လေးညှင်းပွင့ - - အညိုရောင်သကြား 60 ဂရမ် - သစ်ကြံပိုးအရသာ nutmeg အရသာ - ကြက်ဥ 1 အပိုင်းပိုင်း - ကြက်ဥအနှစ်
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - Puff pastry အလွှာ 1 - 200 ဂရမ်သကြားဓာတ် +6အနုပညာ။ l ။ - မုန့်ညက် 50 ဂရမ် - ပြောင်းဖူးကစီဓါတ်3အနုပညာ။ l ။ - ဆား 1 ဖြစ်တော့ - ရေ 500 ml - ဥ
pilaf များအတွက် Zirvak
Zirvak - ဤ Uzbek အဘိဓါန် pilaf များအတွက်အဓိကငံပြာရည်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်တူညီသောနိယာမအပေါ်အမြဲဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့နေဆဲသည်မိန်းမလျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ Locate နှင့်သင့်
ရုံတစျနာရီ၌သင်တို့၏မီးဖိုချောင်ထဲမှာအီတလီ၏အပိုင်းအစ။ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်အတွက်မှိုနှင့်အတူလူသိများခေါက်ဆွဲလျင်မြန်စွာကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အလွန်အရသာရှိတဲ့အထဲကပြန်သွားလေ၏။ မှိုမဆိုယူနိုင်ပါသည်
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - ပုစွန် - 500 ပါ g; - မုန်လာဥ - 1 ရောင်ခြည်; - သံပုရာ - 1 PCs; ။ - စည်သွတ်ပြောင်းဖူး - 1 ဘဏ်, - 20% cream ကို -s - 500 ml ကို; - ဇီယာစေ့ - 1 ရောင်ခြည်; - ဆား။ ပြင်ဆင်မှု၏ Method ကို: အဆိုပါဆားငန်ရေ
← လွန်ခဲ့သော 1 ... 306 307 308 ... 348 နောက်တစ်နေ့ →